Abenzi bezinto zokumbiwa kwembiwa - iBavelisi base China abavelisi, abaxhasi
Indawo yokuthengisa imveliso yeWIK 9085 · Injini yohlobo lophawu lwasekhaya inamandla amakhulu kwaye iyahlangabezana neemfuno zokusebenza ngokukuko. Uyilo olungqamene ngqo nolawulo lokonga umbane olwenziweyo lwenza ukuba ukusetyenziswa kombane kungaphantsi. · Ukusetyenziswa kweefeni ezintsha zokupholisa kunye nezithethi ezinkulu ezenza ingxolo kumatshini ezantsi; · Sebenzisa ubuchwepheshe obuphambili be-turbocharging ukuphucula ukomelela komatshini kwiithafa; Isigqubuthelo sefani esimile okwefaneli sonyusa kakhulu ukungeniswa komoya ...
Indawo yokuthengisa imveliso ye-WIK 9070 · Injini yohlobo oludumileyo yasekhaya inamandla amakhulu kwaye iyahlangabezana neemfuno zokusebenza ngokukuko. Uyilo olungqamene ngqo nolawulo lokonga umbane olwenziweyo lwenza ukuba ukusetyenziswa kombane kungaphantsi. · Ukusetyenziswa kweefeni ezintsha zokupholisa kunye nezithethi ezinkulu ezenza ingxolo kumatshini ezantsi; · Sebenzisa ubuchwepheshe obuphambili be-turbocharging ukuphucula ukomelela komatshini kwiithafa; Isigqubuthelo sefani esimile okwefaneli sonyusa kakhulu ukungeniswa komoya ...
Indawo yokuthengisa imveliso ye-WIK 9088 · Injini yohlobo lophawu lwasekhaya inamandla amakhulu kwaye iyahlangabezana neemfuno zokusebenza ngokukuko. Uyilo olungqamene ngqo nolawulo lokonga umbane olwenziweyo lwenza ukuba ukusetyenziswa kombane kungaphantsi. · Ukusetyenziswa kweefeni ezintsha zokupholisa kunye nezithethi ezinkulu ezenza ingxolo kumatshini ezantsi; · Sebenzisa ubuchwepheshe obuphambili be-turbocharging ukuphucula ukomelela komatshini kwiithafa; Isigqubuthelo sefani esimile okwefaneli sonyusa kakhulu ukungeniswa komoya ...